Mmiri Air Matra Willils na ọnụ ahịa ahịa | Rayson
Na Rayson, Mmelite teknụzụ na ihe ọhụrụ bụ uru anyị. Ebe ọ bụ na o guzobere, anyị na-elekwasị anya na ịhazi ngwaahịa ọhụrụ, imeziwanye ogo ngwaahịa, na ijere ndị ahịa ozi. N'oge opupu ihe ubi, a na-ekwe nkwa na anyị na-ekwe nkwa na anyị na-enye ndị ahịa ọ bụla nwere ngwaahịa dị elu gụnyere ụdị akwa akwa ikuku ikuku na ọrụ zuru oke. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmata nkọwa ndị ọzọ, anyị nwere obi ụtọ ịgwa gị.The ngwaahịa dị nro, ọfụma na okomoko ma enwere ike iji anụ ahụ kachasị njọ. Yabụ ọ bụrụ na ndị mmadụ nwere ụdị mmetụta ndị a, ha ga-amasị ha.